प्रदेश ४ मा मन्त्री मण्डल विस्तार, गोरखाका बस्नेत उद्योग छोडेर भए भौतिक योजना मन्त्री - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
प्रदेश ४ मा मन्त्री मण्डल विस्तार, गोरखाका बस्नेत उद्योग छोडेर भए भौतिक योजना मन्त्री
Published On : १२ चैत्र २०७४, सोमबार १३:२१
चैत ४, गोरखा ः सोमबार प्रदेश नम्बर ४ मा भएको विस्तार सँगै मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाएको छ । यस अघि मुख्य मन्त्री सहित तीन मन्त्री मात्र रहेको प्रदेश ४ मा सोमबारको बैठकले किरण गुरुङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, नरदेवी पूनलाई सामाजिक विकास, बिकास लम्साललाई उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । मन्त्री मण्डल विस्तार सँगै प्रदेश चारको मन्त्रीमण्डलको संख्या सात पुगेको छ । सात मध्ये दुई माओवादीलाई र पाँच एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो ।
यस अघि उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री रहेका रामशरण बस्नेतलाई भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सोमबार नै पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले उनीहरुलाई पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका हुन् । प्रदेश ४ मा गएको फागुन ४ गते नै मन्त्रीपरिषद् गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सहित तत्कालिन उद्योगमन्त्री बस्नेतले सँगै शपथ लिएका थिए भने सोही दिन माओबादी तर्फबाट हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापा मन्त्री बनेका थिए । चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन र थापा भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेको सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका बस्नेतले जानकारी दिए । सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका किरण गुरुङ र मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबीच मुख्यमन्त्री बन्न ठुलै रस्साकस्सी चलेको थियो ।